Jizọs Ejiri Ihe Atụ Ụmụ Agbọghọ Na-amaghị Nwoke Kụzie Gbasara Ịmụrụ Anya (Matiu 25:​1-⁠13) | Ihe Ndị Mere ná Ndụ Jizọs
GỤỌ NKE Alur Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bicol Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Dangme Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Fon French Ga Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Jula Kabiye Kazakh Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Lingala Luganda Luo Macedonian Macua Malagasy Malay Maltese Mauritian Creole Maya Moore Myanmar Norwegian Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Quechua (Cuzco) Romanian Russian Samoan Sango Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tatar Thai Tigrinya Tshiluba Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Uruund Uzbek Vietnamese Wallisian Waray-Waray
ISI NKE 112
Jizọs Ejiri Ihe Atụ Ụmụ Agbọghọ Na-amaghị Nwoke Kụzie Gbasara Ịmụrụ Anya
IHE ATỤ JIZỌS MERE BANYERE ỤMỤ AGBỌGHỌ IRI NA-AMAGHỊ NWOKE
Jizọs ka nọkwa na-aza ndịozi ya ajụjụ ha jụrụ ya gbasara ihe àmà ndị a ga-eji ama oge ọnụnọ ya na ọgwụgwụ usoro ihe a. N’ihi ya, iji zakwuo ha ajụjụ ahụ, o meere ha ihe atụ ọzọ ga-abara ha uru. Ọ bụ ndị ga-anọ ndụ n’oge ọnụnọ ya ga-ahụ mgbe ihe atụ a ga-emezu.
Otú o si bido ihe atụ ahụ bụ: “Alaeze eluigwe ga-adị ka ụmụ agbọghọ iri na-amaghị nwoke ndị buuru oriọna ha gaa izute nwoke na-alụ nwaanyị ọhụrụ. Mmadụ ise n’ime ha dị nzuzu, ma ise nwere uche.”—Matiu 25:1, 2.
Ihe Jizọs na-ekwu abụghị na e kee ndị na-eso ụzọ ya ga-eketa Alaeze eluigwe ụzọ abụọ, otu ụzọ ga-abụ ndị nzuzu, ndị nke ọzọ abụrụ ndị nwere uche. Kama, ihe ọ na-ekwu bụ na a bịa n’ihe gbasara Alaeze eluigwe, onye nke ọ bụla n’ime ndị na-eso ụzọ ya ga-eji aka ya họrọ ma ọ̀ ga-amụrụ anya ma ọ bụ na ọ gaghị amụrụ anya. Ma, obi siri Jizọs ike na onye nke ọ bụla n’ime ndị na-eso ụzọ ya ga-ekwesịli ntụkwasị obi ma nweta ngọzi ndị Nna ya kwere ha ná nkwa.
N’ihe atụ ahụ, ụmụ agbọghọ iri ahụ na-amaghị nwoke pụtara ka ha zute nwoke ahụ na-alụ nwaanyị ọhụrụ, nakwa ka ha soro ya n’ahịrị gaa oriri agbamakwụkwọ ya. Mgbe o rutere, ha ga-amụnye oriọna ha ka e jiri ha na-ahụ ụzọ ma na-aga ebe ha na-aga. Ha ga-esi otú ahụ kwanyere ya ùgwù ka ọ kpọ nwunye ya na-aga ebe e doziiri nwunye ya. Ma, gịnị ka ụmụ agbọghọ iri ahụ mere tupu nwoke ahụ erute?
Jizọs kwuru ihe ha mere. Ọ sịrị: “Ndị nzuzu ahụ buuru oriọna ha, ma ha ejighị mmanụ ọ bụla, ma ndị ahụ nwere uche ji mmanụ ha gbanyere n’ihe ha ji agbanye mmanụ, jirikwa oriọna ha. Mgbe nwoke ahụ na-alụ nwaanyị ọhụrụ na-egbu oge, ha niile hulatara isi wee malite ihi ụra.” (Matiu 25:3-5) Nwoke ahụ na-alụ nwaanyị ọhụrụ abịaghị mgbe ha tụrụ anya ya. Ọ dị ka ò gburu ezigbo oge mere ụra ji buru ụmụ agbọghọ niile ahụ. O nwere ike ịbụ na ndịozi Jizọs chetara ihe ọ kọọrọ ha banyere otu nwoke si n’ezinụlọ eze, nke gara n’ala dị anya ka ọ gaa nweta ikike ọchịchị ma ‘mechaa lọta mgbe o nwetara ike ọchịchị ahụ.’—Luk 19:11-15.
N’ihe atụ ahụ Jizọs mere banyere ụmụ agbọghọ iri na-amaghị nwoke, o kwuru ihe mere mgbe nwoke ahụ na-alụ nwaanyị ọhụrụ mechara rute. Jizọs sịrị: “N’etiti abalị, e tiri mkpu, sị, ‘Nwoke ahụ na-alụ nwaanyị ọhụrụ abịala! Pụtanụ ka unu zute ya.’” (Matiu 25:6) Oleezi ihe ụmụ agbọghọ ahụ mere? Hà kwadoro akwado ma mụrụ anya?
Jizọs kwuru, sị: “Mgbe ahụ, ụmụ agbọghọ ahụ niile na-amaghị nwoke biliri wee dozie oriọna ha. Ndị nzuzu ahụ gwara ndị ahụ nwere uche, sị, ‘Nyetụnụ anyị mmanụ unu, n’ihi na oriọna anyị agawala ịnyụ.’ Ndị ahụ nwere uche gwara ha, sị, ‘Ma eleghị anya, ọ gaghị ezuru anyị na unu. Kama nke ahụ, gakwurunụ ndị na-ere ya zụrụ nke unu.’”—Matiu 25:7-9.
O doro anya na ise ndị nzuzu ahụ amụghị anya, ha akwadoghị akwado maka izute nwoke ahụ na-alụ nwaanyị ọhụrụ. Ha enweghị mmanụ ga-ezuru ha n’oriọna ha. N’ihi ya, ha kwesịrị ịga zụta nke ga-ezuru ha. Jizọs kwuru, sị: “Mgbe ha na-aga ịzụta mmanụ, nwoke ahụ na-alụ nwaanyị ọhụrụ bịarutere, ụmụ agbọghọ ahụ na-amaghị nwoke, bụ́ ndị dị njikere, sooro ya banye n’oriri alụmdi na nwunye ahụ; e wee mechie ụzọ. N’ikpeazụ, ndị fọdụrụ n’ime ụmụ agbọghọ ahụ na-amaghị nwoke bịakwara, sị, ‘Nna anyị ukwu, nna anyị ukwu, megheere anyị ụzọ!’ O wee zaa, sị, ‘Ana m agwa unu eziokwu, amaghị m unu.’” (Matiu 25:10-12) Ọ dị nnọọ mwute na a jụrụ ụmụ agbọghọ ndị nzuzu ise ahụ n’ihi na ha adịghị njikere ma mụrụ anya ruo ọgwụgwụ.
Ndịozi Jizọs ghọtara na nwoke ahụ na-alụ nwaanyị ọhụrụ o kwuru okwu ya bụ yanwa n’onwe ya. Jizọs jibu onwe ya tụnyere nwoke na-alụ nwaanyị ọhụrụ. (Luk 5:34, 35) Gịnịkwanụ gbasara ụmụ agbọghọ ndị ahụ na-amaghị nwoke nwere uche? Mgbe Jizọs na-ekwu banyere “ìgwè atụrụ nta,” bụ́ ndị ga-eketa Alaeze eluigwe, o kwuru, sị: “Keenụ ájị̀ n’úkwù, ka oriọna unu na-enwukwa enwu.” (Luk 12:32, 35) N’ihi ya, n’ihe atụ a Jizọs mere banyere ụmụ agbọghọ iri na-amaghị nwoke, ndịozi ya ga-aghọta na ọ na-ekwu banyere ndị na-eso ụzọ ya kwesịrị ntụkwasị obi, dị ka hanwa. Oleezi ihe Jizọs ji ihe atụ a na-akụziri ndị na-eso ụzọ ya?
Ihe niile Jizọs ji ihe atụ a kụziere ndị na-eso ụzọ ya doro nnọọ anya. Mgbe Jizọs na-emechi ihe atụ ahụ, ọ gwara ha ihe ọ chọrọ ka ha mụta na ya. Ọ sịrị: “Ya mere, na-echenụ nche, n’ihi na unu amaghị ụbọchị ma ọ bụ oge awa ọ ga-abụ.”—Matiu 25:13.
O doro anya na Jizọs na-agwa ndị na-eso ụzọ ya kwesịrị ntụkwasị obi ka ha “na-eche nche” n’oge ọnụnọ ya. Jizọs na-abịa, n’ihi ya, ha kwesịrị ịdị njikere ma mụrụ anya ka ụmụ agbọghọ ise ndị ahụ na-amaghị nwoke, bụ́ ndị nwere uche. Nke a ga-eme ka ha ghara ileghara olileanya magburu onwe ya ha nwere anya, meekwa ka ngọzi Chineke ghara ịkwa ha.
Olee otú ụmụ agbọghọ ise ahụ nwere uche si dị iche n’ụmụ agbọghọ ndị nke ahụ dị nzuzu ma a bịa n’ihe gbasara ịmụrụ anya na ịdị njikere?
Ònye bụ nwoke ahụ na-alụ nwaanyị ọhụrụ? Ole ndị bụ ụmụ agbọghọ ahụ na-amaghị nwoke?
Olee ihe Jizọs na-akụziri anyị n’ihe atụ o mere banyere ụmụ agbọghọ iri na-amaghị nwoke?
GỊNỊ KA BAỊBỤL NA-AKỤZIRI ANYỊ?
Ọgwụgwụ Ụwa Ọ̀ Dịla Nso?
Tụlee otú àgwà ndị mmadụ na-akpa si egosi na anyị bi n’oge ọgwụgwụ otú ahụ Baịbụl buru n’amụma.
Gịnị Mere Kraịst Ga-eji Abịa Ọzọ?
Gịnị mere Kraịst ga-eji abịa ọzọ? Ọ̀ ga-abụ mmadụ ka ọ̀ ga-abụ mmụọ mgbe ọ ga-abịa ọzọ, oleekwa ihe ọ ga-eme mgbe ahụ?
Ị̀ Ga ‘Na-eche Nche’?
Gụọ otú e si mee ka ilu Jizọs tụrụ banyere ụmụ agbọghọ iri na-amaghị nwoke dokwuo anya. A kọwara ihe dị mkpa anyị kwesịrị ịmụta na ya.